Ny Trano Fotsy dia manambara ny fivarotana ny Dredges nandritra ny dia tany Obama tany India
Janoary 17, 2011
Ho famoahana eo no ho eo ny laharana 10, 2010
Nandritra ny fitsidihana manan-tantara nataon'ny filoha Obama tany India ny herinandro lasa teo dia nanambara ny Trano Fotsy fa hisy fivarotana dredger vaovao roa tany India nataon'i Ellicott Dredges, LLC any Baltimore, Maryland. Jereo eto ny famoahana ny gazety fotsy trano. Ellicott dia tafiditra tao amin'ny fanambaràn'ny White House niaraka tamin'ny orinasa amerikana malaza hafa toa ny Boeing, General Electric, Harley-Davidson, Bell Helicopter, ary Bucyrus.
Maharashtra Maritime Board dia hampiasa roa Series 370 HP Dragon ™ Cutterhead Dredges, ilay dredge cutter malaza indrindra namboarina, hitazomana ireo seranan-tsambo fanjonoana sy tributaries isan-karazany ao amin'ny State of Maharashtra, andrefana India. Hatramin'ny nanambaran'ny filoha Obama ny National Export Initiative (NEI) tamin'ny lahateny nataony tamin'ny State of the Union tamin'ny taona 2010, ny departemantan'ny varotra amerikana dia nanentana mafy ireo orinasa kely sy salantsalany toa an'i Ellicott hanampy amin'ny fampitomboana ny fanondranana amerikana.
Ny filoha Obama dia manambara ny US $ 10 Billion an'ny fifanarahana eo amin'ny orinasa indiana sy amerikana anisan'izany Ellicott. (Sary avy amin'ny The Indian Express)
Ellicott Dredges no mpanamboatra dredges kely sy salantsalany amerikana. Nankalaza ny faha-125 taonany tamin'ity taona ity. Namidy ny dredge voalohany tany India i Ellicott taonjato zato lasa izay. Tamin'ny volana martsa 2010, ny sekretera amerikana Locke, Locke, dia nitsidika ny orinasa Balticore an'i Ellicott ary niantso an'i Ellicott fa “mpanondrana [amerikana] manan-danja."
Ny sekretera amerikana Locke (eo amin'ny lampihazo) sy ny kongresista John P. Sarbanes manoloana ny Ellicott Series 370 HP Dragon ™ Cutterhead Dredge nandritra ny fitsidihan'izy ireo ny orinasa Balticore an'i Ellicott.
Ny filoha Ellicott Peter Bowe dia nisaotra ny Departemantan'ny Varotra noho ny fanampiana azony tamin'ny fiarovana ity loka fifanarahana ity ary nanambara ny fankasitrahany ny fanohanan'ny Fitondrana ireo fanondranana any Etazonia.
Ny 370HP Dragon ™ Dredge no rafitra mahomby sy mahomby ary azo antoka fa misy na aiza na aiza misy azy na aiza na aiza.
Raha mila fanazavana fanampiny, mifandraisa amin'i Robin Manning ao amin'ny (410) 545-0232 na rmanning@dredge.com.
Lahatsoratra navoaka indray avy amin'ny Dredge.com